Kwadoro !! Gam akporo ihuenyo ekpuchi nsogbu | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Nche, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ị chọrọ gbanyụọ mkpuchi ihuenyo? Otu n'ime ajụjụ ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo na-ajụ m n'oge na-adịbeghị anya, ndị ọrụ nwere nsụgharị nke Android Marshmallow, bịakwute anyị n'ihe gbasara ikikere gam akporo na kpọmkwem na nsogbu na ihuenyo machie na gam akporo, ikike nke dị na gam akporo maka ụfọdụ nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ yana na ebe ọ bụ na Android M agbanwetụrụ ntakịrị ọbụlagodi ngalaba akọwapụtara na ntọala nke gam akporo anyị nke zoro ezo, nke mere na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ebe ịchọta nhọrọ a n'ime ntọala gam akporo.
Ọ bụ ya mere m ji kpebie ịmepụta vidiyo vidiyo a, nke m na-akọwa ihe kpọmkwem nke mejupụtara Nweta ikikere iji kpughee machie gam akporo M. N'otu aka ahụ, ana m ewere ohere ịkọwapụta nke ọma ngwa ndị na-ejikarị ya eme ihe, site na nke ahụ, na mgbakwunye na igosi gị nzọụkwụ site na ntọala ebe ntọala ga-ejikwa ngwa ndị nwere ike iji nke ikikere mkpuchi ihuenyo ahụ, na ụfọdụ ha nwere ike ịkpata nsogbu na ụfọdụ gam akporo ngwa na ebe ịchọta ha bụ ezigbo odyssey maka ndị ọrụ nwere obere ahụmahụ.
1 Kedu ihe bụ ihe mkpuchi ihuenyo na gam akporo?
2 Kedu ka m ga - esi dozie nsogbu dị na gam akporo?
3 Old video iji gbanyụọ ihuenyo machie
Kedu ihe bụ ihe mkpuchi ihuenyo na gam akporo?
Ihuenyo ekpuchi na gam akporo bụ ikike pụrụ iche na na-enye ohere ngwa ịnọgidesi ike ma gosipụta n'elu ngwa ndị ọzọ na anyị na-agba ọsọ na njedebe gam akporo anyị. Nke a, na nsụgharị tupu gam akporo M, bụ ikikere nke ngwa nwere ike ịnweta na-akpaghị aka site na ịtinye arịrịọ nnweta ahụ na akwụkwọ document.xml nke mmepe nke ngwa ahụ n'onwe ya. Nke a ikike na-eme ka ojiji nke ALERT_SYSTEM_WINDOWS, dị ka nke Android 6.0 Marshmallow nsụgharị, dị ka ikike niile nke ngwa gam akporo na-enweta, agbanweela ụfọdụ mgbanwe na njikwa ha, ma ugbu a, mgbe anyị na-agba ọsọ maka ngwa maka oge mbụ anyị ga-ajụ maka ịnweta ikike niile nke hotara na mbụ ngwa chọrọ ka arụ ọrụ dị ka o kwesịrị.
N'ihi nke a na mkpa ijikwa ihe a ikikere weere oke ihe egwu, E tinyela ngalaba ọhụrụ n'ime ntọala gam akporo, site na ebe anyị ga-enwe ike ijikwa ikikere mkpuchi ihuenyo ndị a.
N'ihi na ị na-aghọta ya na a nnọọ mfe n'ụzọ, n'etiti ụfọdụ ndị kasị ewu ewu na ngwa nwere a na ihuenyo machie ikike na gam akporo, anyị gụrụ dị ka ihe atụ dị ịrịba ama na Facebook ozi ngwa na ya kwukwara atụmatụ nke na-egosi anyị notma Ọkwa nke ozi ọhụrụ natara dị ka akara mmiri na-ese n’elu mmiri ka mmadụ niile mara Ozi egosipụta o Nkata Nkata.
Ọzọ nke ngwa na-eji nke a ihuenyo machie na-arụ ọrụ nke ọma pụrụ ịchọta, ọmụmaatụ, na ọhụrụ update nke Google Translate na ọrụ ohuru ya na-emetụ, ọrụ na-enye anyị ohere, yana nhọrọ dị mfe nke ederede ọ bụla na ịpị nhọrọ nhọrọ, na a akara ngosi Google Translate na-ese n'elu ya nke ị ga-esi nweta ntụgharị ntụgharị asụsụ ederede ederede.
A na-ahụta ikike a na gam akporo dị ka ihe dị oke egwu ma ọ bụ nwere ike ịdị ize ndụ ebe ọ bụ na ngwa ngwa nwere ike iji ya mepụta mkpuchi ihuenyo nke ngwa ngwa anyị mbụ, ihe ngebichi nke ngwa a na-adịghị ahụ anya nke nwere ike ijide mmetụ anyị na ihuenyo ma zuo ozi ma ọ bụ mee ka anyị pịa na-enweghị anyị n’amaghị ebe anyị na-eme ya, dịka ịdenye aha ndị ahụ arụ ọrụ adịgboroja SMS nke bụ ezigbo isi ọwụwa.
Kedu ka m ga - esi dozie nsogbu dị na gam akporo?
Etu m siri kọwaa nke ọma na vidiyo etinyere na nkụnye eji isi mee nke ọkwa a ma m na-egosi gị usoro site na ntanetị iji chọta ntọala ihuenyo ndị a na gam akporo M Idozi ihuenyo machie nsogbu na gam akporo M, ọ ga-ezu iji mara ngwa a kapịrị ọnụ nke na-ebute nsogbu ahụ e kwuru na mbụ, wee gaa n'ụzọ ahụ Ntọala / Ngwa / Njikwa ngwa na ịpị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, na bọtịnụ menu nwere ike igosipụta dị ka cogwheel, n'ụdị ntụpọ atọ ma ọ bụ n'okpuru okwu MAS.
N'ụzọ dị mfe a, anyị ga-enwe ohere na njikwa nke mkpuchi ihuenyo na gam akporo M, nke anyị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ mkpuchi ihuenyo kpamkpam ma ọ bụ ọbụna jikwaa ikikere n'otu n'otu nke ngwa niile nke anyị nyere ikikere a.
Old video iji gbanyụọ ihuenyo machie
Anyị na-ahapụrụ gị vidiyo mbụ anyị dekọtara na nke anyị na-akọwakwa otu esi ewepu mkpuchi ihuenyo na gam akporo, nsogbu na-akpasu iwe nke ọtụtụ n'ime gị nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Gbanyụọ mkpuchi ihuenyo
Ihe 222 kwuru, hapụ nke gị
Mana ọ bụrụ obere akara ngosi nke ngwa ahụ ịchọrọ iji nyefee ikikere ikikere, ọ pụtaghị na ndepụta ngwa ahụ. Kedụ ka m ga-esi nye gị ohere? Na nke a achọrọ m ngwa ahụ n'ihi na o si n'ụlọ akụ. Ana m ewere ara na-achọ ụzọ m ga-esi dozie nsogbu m. Ọ na-egosi m ngwa ole na ole na listi. Daalụ maka inyere m aka.
Att. Ndị na-achọsi ike
Ndewo, m wụnye mmelite kachasị ọhụrụ ma amalitere m ịta ahụhụ site na nsogbu a .. Onye ọ bụla nwere ike inye aka dozie ihe ngebichi a. M gbalịrị ihe niile na ihe ọ bụla ...
Ndewo ndewo, amaara m na esemokwu ahụ emeela ochie mana maka ndị ọhụụ na-ahụ nke a bụ ihe ngwọta nye ikpe ha ebe ọ bụ na ọ mere m na Samsung s6 ma ọ bụ s5 ha na-aga ntọala-njikwa njikwa mgbe ha na-apụ ha ga-ahụ isi atọ n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ okwu ọzọ pịa ebe ahụ wee họrọ ngwa nwere ike ma nwee ike iwepụ otu aka site na iwepu ihe na-acha anụnụ anụnụ na agba ntụ na ọ bụ ya, ngwa ọ bụla nwere ike hazie ha ka ha nwee obi ụtọ
Zaghachi Franc Ch
Daalụ Franc ọ rụrụ ọrụ 100% maka m
Ahụrụ m ma nwalee nke ahụ, ọ bụrụ na ị rụnyela ngwa ahụ dị ọcha ma ọ bụ nkwado dị elu (nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ya), ngwa ngwa ndị a na-egbochi ngwa ahụ, enwere olile anya na ọ bụ ikpe gị
Ọ bụrụ na ị nwere nna ukwu dị ọcha desistalalo ọ rụrụ ọrụ maka m
Ekele dịrị gị nke ukwuu DANDI Ọ B IFR IT NA Ọ B FORGH FOR Ọ B YOU Ọ B YOU Ọ B I G YOU KA M KWURU ỌBPRP ỌBPR FROM NKE SITE NA EGO NA-ECHICHE !!! 😀
Karlobell paradaịs dijo
Daalụ enyi, ị kụrụ ntu na isi ... nke ukwuu na-ekiri vidiyo ndị kwuru otu ihe ma ọ nweghị ihe baara m uru, ị nyere m azịza ya ugbu a ee hahaha daalụ
Zaghachi Karlobell Paradas
GRADE LOBITOOO¡¡¡¡¡¡tb rụụrụ m ọrụ
Zaghachi ricardo taibe parraguez
Daalị daalụ nke ukwuu
nsogbu m di ka ndi mbu niile. Amaghị m otu esi eme ka mkpuchi ihuenyo kwụsị
N'okwu m ọ bụ akwụkwọ Huawei P 8 ma ọ naghị ekwe ka m kpochapụ ihe ngebichi na-emetụta, n'uche, WhatsApp, dị mkpa.
A ga-enwe ekele maka enyemaka ọ bụla
Hey, daalụ, okwu gị bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ngwa ahụ bụ nke na-etinye windo ndị a ma ghara ikwe ka enye ikike
Nna papa yanky dijo
Daalụ nke ukwuu. Iwepụ ezigbo nna m ukwu rụkwara ọrụ maka m. Are bụ nna ukwu 🙂
Zaghachi Papa yanky
Ekele m na amaghị m otu m ga-esi edozi nsogbu m ma ọ bụrụ n’ezie na ọ bụ nna ukwu dị ọcha gbochiri m
Nyere m biko nwaa ihe niile rue mgbe m nyere iwu na ekwentị, iwepụ Clean Master ma ọ ka ga-ekwe ka m na-enye WhatsApp ikikere kpọrọ ihe ọ bụla ngwọta
Ana m ekele gị nke ukwuu Dandiiii .. Isi na-agba m, maka na vidiyo niile m hụrụ na youtube na ihe ọ bụla .. daalụ maka enyemaka gị !!!!
Onwere otu nsogbu m enweghi ike inweta ikike watsap, enwetaghi akara icons i gosiputara na vidio m ga ara
Daalụ Dandi bụ ezigbo nna ukwu dị ọcha, anyị ga-etinye ihe ndị a na-ekwu na ụlọ ahịa egwu
Zaghachi Juan DAvid
Ihe eji eme ihe na Claudia dijo
Dandy. Nnukwu !!! Mee nke ahụ. Desistalen clan oo ihe ọ bụla i nwere dị ka onye nhicha. Ọ bụ anwansi. Nsogbu agafeela.
Zaghachi Claudia Plachicoff
Ọtụtụ ekele nye ndị enyi kwuru: Dandi na ọkachasị Claudia, onye kwuru okwu banyere ndị na-ehicha ihe, n'ọnọdụ m ọ bụ ES File Explorer, ọ bụrụ na ọ bụghị gị, agaghị m edozi obere nsogbu a. !! Ana m ekele ndị enyi nke nnọkọ a!
SO DANDI, Kedu ka m ga - esi wepụ ya n’aka nna ukwu dị ọcha ???
I meela nke ukwuu Dandi, ekwentị m nwere nsogbu a na enweghị m ike idozi ya, ewepụrụ m nna ukwu dị ọcha na ọgwụgwọ dị nsọ… SalU2s… José Miguel.
Zaghachi José Miguel Jara Díaz
Daalụ nke ukwuu, M na-agbalị ụtụtụ niile, m mechara nweta ya 🙂
Zaghachi ka enyemaka
Ndo, m pụtara BIG DANDI.
N'okwu m, edozi nsogbu ahụ site na ịmanye mmechi nke ngwa SMART ADMINISTRATOR, ọ na-arụ ọrụ dị ka nna ukwu dị ọcha, naanị na ọ na-abịa na ndabara na s6
Thanksssss i zoputara m ma ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ mgbe iwepu ezigbo nna ukwu.
THANKS BROTHER DANDI UNINSTALL ỌMACHLE ỌMA NA-ECHI MGBE NKE NT SCKWU ND THE BLB BLR BL ESSBESSRESS… B ARE ỌKA !!
daalụ, ngwa ahụ iberibe bụ nsogbu
Ihuenyo ekpuchila m n’okporo ụzọ ilu. Mgbe ọtụtụ ntụpọ ìsì, n'ọnọdụ m nsogbu edozila site na iwepu mmemme CM Locker.
Maka whatsaap m ga-ehichapụ ngwa m jiri ma ọ baara m uru
Akwụsịrị m nna ukwu doro anya ma dozie nsogbu ...
Ahuru m ka nkuzi 4 ma o nweghi ihe m ghotara ... daalụ nke ukwuu ..
Zaghachi na Angelicasv43
O mekwara ka m ghara ịla n'iyi ruo mgbe m malitere idozi ngwanrọ ahụ ma eme ya wee nwee nsogbu ahụ wee bịaghachi ,,,, ihe ngwọta m nyere site na iwepu ngwa ngwa ngwa ngwa Du ma enwere m ihe ịga nke ọma, enwere m olileanya na ọ ga-aga n'ihu otu a, odika m na ngwa ndi ahu ka ebe nchekwa no nsogbu bu ,,, enwere m olile anya na o gha enyere gi aka
Ndewo Fernando, ebe ọ bụ na Sọnde nke 28 m nwere nsogbu mkpuchi ihuenyo. M na-ele ụfọdụ vidiyo m mụtara ụfọdụ ọhụrụ na ezi ihe; ma o dozighi nsogbu ahụ. Ekele diri okwu gi iwepu DO SPEED BOSTER dozie nsogbu a. ỌTT TH IHE DAN MARA
Zaghachi Carlos Augusto
Hichapụ ihe niile dị ọcha nwe, ndị nke nje virus gara aga m jidere ha
wepụ ikike n'aka mmadụ niile
Ezigbo Nilsa Nilsa, enwere m nsogbu a na ngwa abụọ, Easy Taxi na Watsap, agbasoro m ntuziaka nke Franc Ch nyere ma dozie okwu ahụ. Ana m eji ohere a na-ekele Franc CH.
Ami otu ihe ahụ mere m, echegbula onwe ya, o nwere ihe ọ ga - eme, ọ bụghị ịtụ ụjọ n'ebe dị anya, ebe m nwere mmelite nke mkpanaka m dị ukwuu enwere m obi anụrị, ka ọ ghara ime gị. nwere ịchọ mmemme nke na-atụ aro ihe gbasara ikikere, Nke ahụ bụ, ọ ga-ekwe omume na ị nwere mmemme nke na-emetụta nchekwa ekwentị gị ma nwee esemokwu mgbe ị na-achịkwa ikike nke ikikere ahụ, ana m atụ aro iwepụ ngwa ma ọ bụ jikwaa ikikere site na otu ma ọ bụ ngwa ọzọ, ihe niile bụ maka nke ahụ, enwere m olileanya na ndụmọdụ m dị mma maka gị ma ọ ga-edozi = D
hello great I just saw the solution desistale clena nna ukwu. ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-enye gị ohere ịhapụ ebe nchekwa nke ekwentị .. mgbe ị gosipụtara na ala nke ihuenyo ị ga-enweta akara ngosi akara ngosi .. na-atụ anya na ọ ga-ejere gị ozi. O were ọtụtụ awa iji nweta ya .. mana ọ bụlarị 10 ihe ọ bụla. chuca.cris27@gmail.com
Nwere ike ịkọwara m obere ihe nke ọma? Echere m na ị nwere ihe ngwọta ...
Enweghị ụzọ m nwere ederede 4 ma echere m na ọ bụ mgbe m wụnye Poquemon go .. ọ na-arụ ọrụ oge niile .. ugbu a anaghị ekwe ka m banye ebe ngosi ahụ.
Ndewo Teresa, ị nwere ike idozi nsogbu gị? Otu ihe ahụ mere m, m wụnye Pokemon Go na m malitere inwe nsogbu.
n'ihi na ndị na-pokemon ga gbanyụọ mpụga ngwa na nchekwa n'ime ntọala
kelere m, m gbalịrị ma enweghị ike. M tọgharịa ekwentị m ka m wee ghara ịdị ọcha nwe ma ọ bụ ihe ọ bụla na m ka nwere nsogbu na ọ naghị ekwe ka m jiri adịgboroja GPS na pokemon ọnụ. M na-agbalị ime ka ọ rụọ ọrụ na ntọala na mmapụta bọtịnụ maka ngwa a anaghị arụ ọrụ.
Ami ọ bụụrụ m ọrụ disintegrating dị ọcha nna ya ukwu
Daalụ ụmụ agbọghọ, ọ rụpụtara m iwepu nna m ọcha dị otu puku puku ekele maka okwu gị
Achọrọ m ịma, amaghị m otu esi edozi nke a. Echere m na ọ malitere site na nrụnye PRISM MA M KWESINR IT YA NA NT SCKWU ND O NA-ECHI nsogbu. WHATSAPP A NA-ADESSGH TO EGO NA Kpọtụrụ ma ọ bụ enweghị ike ibudata foto. INZỌ ZỌRỌ
Naanị iwepụ Nna-ukwu dị ọcha ọ rụrụ ọrụ nye m ekele Dandi
Onwere otu nsogbu m di biko biko ma oburu n’imara ka igwa m wepu nzuzu a
Akwụpụla m Master Master ma dozie nsogbu ahụ. Daalụ nke ukwuu
Enweghị m Master dị ọcha mana enwere m nsogbu ahụ, enwere ike ịnweta ngwa yiri nke na-akpata otu esemokwu ahụ?
Emeela! Akwụsịrị m DU SPEED BUSTER ma dozie ya. Daalụ
Ọ bụrụ na m kpochapụrụ ihe niile haha ​​na-achọsi ike ụbọchị 2 batayando na alfiiiiiin niile solusionado
Jr kwadoro dijo
Ọ gaghị ekwe ka m wepụ DU ọsọ booster, kedu ka m ga esi eme ya?
Zaghachi Jr Pareded
Dandi ... otu puku ndị na-ekele m nọ na-achọ idozi m achọ ịma overlap maka 6 awa ... ma ugbu a, mgbe m na-agụ ndụmọdụ gị na m uninstalled ọcha nna ukwu na ọ na-arụ ọrụ ...... ekele daalụ
Daalụ nke ukwuu .. Dandi maka ndụmọdụ gị iwepụ ezigbo nna ukwu na nsogbu nke m achọ ịma overlap e edozi ekele ...
Abụ m onye ọzọ aja nke a nke ebe m arụnyere Samsung Gear. M uninstalled ngwa na ọkara nke ngwa ka na-adịghị arụ ọrụ n'ihi na m achọ ịma ihuenyo overlap. Nke a na-initialize unit na wụnye ihe niile ọzọ, a ezigbo ihe mgbu na ịnyịnya ibu.
A ga-ewepụ ndị nhicha niile, mana ọ nweghị ụzọ isi banye wasa ... maka njedebe
Enwere m ihe edeturu 4 na enweghị m ike iwepu ihe ngebichi, enweghị ụzọ, ikike nke ngwa ahụ jụrụ m maka ha pụtara ka arụ ọrụ, mana mgbe ị na-aga ihuenyo nke mere na ngwa ahụ nwere ike iji igwe okwu, ozi wdg, enweghi ike imeghari ihe ọ bụla
Javier, dị ka gị, enwere m ihe edeturu 4 na 2 ụbọchị gara aga enwere m isi ọwụwa a mana m hapụrụ 5 nkeji gara aga ngwa ndị na-ewepụta ebule na ohere. Dị ka nna ukwu dị ọcha. Du booster. Du batery .. CM mkpuchi na zuru oke m nwee ike iji WhatsApp na Facebook messenger. .. Ara na-agba m .. !! Ọ bụrụ na ihe na-enyere gị aka chevre .. !!
Zaghachi Ruth alcarraz
M ụnyaahụ mere mmelite na bq aquaris m5 m na nsogbu a malitere inye m taa, na amaghị m otu esi ewepu ya, na ịgụ ihe ị kwuru, ewepụla m ngwa dị ka super dị ọcha ma ọ bụ ihe ọ na-eme m. , ọ bịara bụrụ na m nwekwara cm doro anya ma ọ bụ ihe dị ka nke a, gbaghara m na amaghị m etu esi ede ya, achọpụtara m ya na ekwentị m na-eme m nke ọma, yana mmelite gam akporo kachasị ọhụrụ ọ ka mma ịghara inwe ngwa nhicha ọ bụla xq ma ọ bụrụ na mkpuchi ihuenyo anaghị awụgharị
Zaghachi David Martinez García
Enwere m Z5 Premium ma hapụ m ka m rụọ ọrụ mkpuchi nke ngwa ọ bụla, nhọrọ ahụ na-egosi na agba ntụ. Enweghị m nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, gịnị ka m ga-eme? Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu
N'okwu m, nke m na-amaghị ma ọ bụrụ na ị gụọ, ọ sịrị na edozila m maka m iwepu CM Locker, nke ga-abụrịrị site na otu ngwa ngwa Master Master. Mana na weebụsaịtị ndi ozo ha na ekwu maka iwepu Lux Lite, Twilights na ngwa ndi ozo. Naanị ihe m nwere ike iche na ịkwado bụ ka ị wepu ngwa ngwa otu, ọkachasị ndị metụtara nchekwa na nchekwa, iji hụ ma ị kuru igodo. Amaghị m ihe ọ bụla gbasara ya, naanị ihe m ma bụ iti nwoke kpuru ìsì.
ikwu okwu dijo
Ana m ekele gị maka nkwupụta ndị a n'ihi na eziokwu bụ na mkpuchi ihuenyo na-eme ka ịchọrọ itinye ekwentị gị na mgbidi.
Naanị m kpochapụrụ nna ukwu ahụ dị ọcha ma ọ gaghị edozi ma emesịrị m wepụ batrị dọkịta na nsogbu mkpuchi ihu igwe. N’ikpeazụ, ekwentị ahụ bụ nke m, daalụ maka ihe ị kwuru.
Pfff akpatre mgbe ogologo search iwepu ngwa na-egosi gosiri «Etiti abalị». Ngwa nke na-ewetu ihie ihuenyo (mara na abalị anyị na-ekpu ìsì) ma ugbu a amaara m na ndị na-ebute ụdị nsogbu a bụ antivirus, ndị na-agbadata ihie, ndị na-ebuli ekwentị anyị, chọọ maka ụfọdụ n'ime ndị ahụ ga-abụ. Echere m na okwu m nyeere gị aka
Zaghachi Rodrigo Colli
. Ọ rụụrụ m ọrụ ugbu a, ajụjụ a bụ ... ọ bụrụ na m ewepu ngwa ndị a niile, kedụ ka m ga - esi bulie ekwentị?
Zaghachi Carla Gonzales
Aga m edogharịrị ha otu otu, na-achọpụta usoro nke ọ bụla na ihe na-aga nke ọma, rue mgbe m chọpụtara onye na-akpata nsogbu ahụ. Ikwesighi ime ma ha niile. Dịka ọmụmaatụ, m ka na-eji Clean Master Lite enweghị nsogbu ọ bụla.
Enweghị m ngwa nhicha dị ka nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ ihe ọ bụla arụnyere, mana enwere m ike ịchọta azịza ha wee kwụsị ọrụ ahụ na ụlọ, azụ na bọtịnụ menu na-egosi na ihuenyo ahụ, gaa na ntọala> ihuenyo na ndabere> arụ ọrụ na otu aka> akụkụ igodo n'akụkụ ma gbanyụọ nhọrọ ahụ
Zaghachi Joako Mariaca
Daalụ t. Nke ahụ bụ ụzọ iji dozie ya mgbe ụbọchị 4 gasịrị. Enwere m Nkọwa 4. Na ntọala, ntọala ngwa ngwa, ihuenyo na ndabere, ọrụ aka otu aka ma gbanyụọ nhọrọ 3 niile
Daalụ Ana, onye ọ bụla n'ime anyị nwere mkpanaka ma ọ bụ ezie na ọ bụ otu ọnọdụ ahụ, ihe ngwọta ahụ dị iche na-adabere na njedebe. N'okwu m, ekele gị ikwu na ọ bụ sere n'elu button.
Gaa akwa dị mfe ma n'otu oge ahụ bụrụ ihe nzuzu na mgbagwoju anya. Daalụ nke ukwuu
Daalụ Ana m hụrụ gị n'anya, enwere m ọnwa na nke a m mebiri emebi emere m ihe niile iji melite ngwanrọ ahụ, ụlọ ọrụ na-ehichapụ ihe niile na ihe ị kwuru abaghị uru m.
Daalụ! Enwere m nsogbu ahụ, enweghị m ike idozi ya ma weghachite ekwentị ahụ na ncha, izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dakwasịrị m ọzọ (n'ezie, mgbe m tinyere akụkụ ahụ n'akụkụ) ma enwere m olileanya na-eche na m ga-amalite site na ncha.
Samsung ahụhụ na mbipute 6 nke ndetu 4.
Alejandro Correa kwuru dijo
Ekele enyi si Colombia, aga m edozigharị akụrụngwa ma ọ bụ kwatuo ya na mgbidi…. akara m galaxy 4 bụ azụ.
Zaghachi Alejandro Correa
Daalụ Joako Mariaca mgbe ọ gbalịsiri ike ka ọ bụ ndị igodo ahụ na-ese n'elu mmiri bụ nsogbu ahụ.
Ndewo enyi i meela. na nke m na-edozi mpịakọta ekele ekele
Ekele dịrị gị niile ejiri m dozie nsogbu m. .. o mere m esemokwu. CM mkpuchi .. dị ọcha nna ukwu. . Ọkụ bat…. Achọrọ m ịtụfu ekwentị m. Enwere m ihe edeturu 4 na achọrọ m ịtụ ya n'ala maka ụbọchị 2. ... ọ na-akpasu iwe. .
Daalụ Francisco maka ibipụta akwụkwọ a ma si otú a kwuo okwu niile gbakwunyere ọka iji dozie nsogbu m .. !!
Ọ bụrụ n’ile anya, ngwa a ga-ewepu n’okwu ọ bụla nke ndị a tụlere ebe a na-agbanwe nke ukwuu, ha dị iche na otu onye na onye ọzọ, n’agbanyeghi na Ọ dị ọcha Master bụ onye na-achịkọta ọtụtụ vootu. Ọ na - esiri ike na nsogbu ahụ, kama ịbịa site na ngwa a kapịrị ọnụ, sitere na saịtị ọzọ, nke m na - enweghị ike ịmata. Joako na-enye ihe ngosi, n'ihi na n'ọnọdụ ya, ihe ngwọta ahụ abụghị iwepụ ngwa, mana ọ rụghị ọrụ maka m, n'ihi na nhọrọ nhazi ndị ahụ o kwuru adịghị adị na gam akporo m. Ka o sina dị, ka anyị chere ka Sherlock Holmes debeere anyị ihe omimi. Ruth, ọ bụghị ịtụfu mkpanaka ahụ, tupu nke ahụ ka mma iweghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke m na-achọ ime, na nnukwu ihe mgbu n'obi m, n'ihi na nke ahụ pụtara itinyeghachi data, ngwa, wdg.
Enweghi m ngwa ọbụla etinyere ma ugbu a anaghị enye m ohere ịse foto jọgburu onwe ya. Ekwentị m bụ Samsung S5 na enwebeghị m nsogbu ọ bụla tupu ma ugbu a na mberede, enwetara m nke a. Eziokwu oke egwu. Ọ ga-amasị m na mmadụ nwere ike inyere m aka.
Akwụsịrị m nna ukwu ahụ dị ọcha ma nsogbu ahụ gara n'ihu. Wee iwepu cm nchekwa ma dozie misoi
Zaghachi na elautormadrid
Daalụ maka enyemaka. Ewepugoro m Master dị ọcha
Ama, o di m ka na anyi nile bu ndi amateurs na odighi ndi okacha amara. Na mkpokọta, dịka ị ga-ahụ, site na iwepu nke a ma ọ bụ ngwa ahụ anyị edozila nsogbu ahụ, onye ma ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ maka gị, m ga-atụ aro ụzọ atọ ọzọ.
1) Lee anya n'okwu Joako. Ọ bụ naanị ya doziri nsogbu ahụ n'ụzọ ọzọ, echere m.
2) Gaa na Ntọala / Ngwa / Hazie ma ọ bụ jikwaa ngwa (nke a dabere na gam akporo dị iche). Ndị a bụ ngalaba abụọ iji kpọọ: ikikere Ngwa na Gosi na ngwa ndị ọzọ. Na Ngalaba Ikike ị nwere ike ijikwa nke ngwa nwere ike ịnweta Nchekwa, ma ọ bụ Ndi ana-akpo, ma ọ bụ Igwefoto (Achọpụtara m n'otu oge na ngwa kọntaktị m enweghị ike ịnweta Nchekwa, yabụ ị nwere ike ịsị ma eleghị anya ngwa igwefoto gị agaghị enwe ike ịnweta ugbu a na Nchekwa ). Na Ihe ngosi na ngwa ndị ọzọ lelee na n'ozuzu ọ na-ekwu Ee maka ọtụtụ ngwa, nke bụ ihe ya.
3) Ọ bụrụ na ihe niile dị n'elu anaghị arụ ọrụ maka gị, bọtịnụ nuklia: weghachite ekwentị n'otu ọnọdụ dịka ị zụrụ ya. Na Ntọala / Ndabere, gbanye nkwado data na nhọrọ weghachite akpaaka (nke ọma, ọbụlagodi na LG m), wee pịa "Ntọala data ụlọ ọrụ". Ọ bụ ihe mgbu na ịnyịnya ibu, ebe ọ bụ na ị ga-abanyeghachi n'ụdị ntọala dị iche iche, mana ọ nwere ike ịbụ naanị ụzọ ị ga-esi weghachite ekwentị gị (belụsọ ma ọkachamara enyere anyị aka).
Nne nke amuru gam akporo ...
Psole, daalụ maka ozi na nyocha gị, ị zọpụtara m ka m ghara ibibi ekwentị m, enwere m ọrịa ugbu a enwere m samsung galaaxy s6 ma nye m nsogbu ọ bụla, mana achọpụtara m dị ka ị kọwara ma dịkwa njikere, ugbu a enweghị ihe nkiri, gị mere….
Otu ihe ahụ mere m, ehichapụ m nna ukwu ahụ dị ọcha ma ọ rụpụtara m maka ekele niile
Jonathan Anya dijo
Emechara m dozie nsogbu ahụ, ọ na-ewute m na m malitegharịrị ekwentị ọtụtụ ugboro, ekele
Zaghachi Jonathan Sayes
M na-agbalị ihe niile na ihe ọ bụla.
mobile dị ọhụrụ.
Ysmụ okorobịa enweelarị m azịza doro anya iji kpuchie ekpuchi nke ọma na nke a bụ njedebe. Akwụsịrị m nna ukwu cken na dọkịta batrị mana ọbụlagodi na ụfọdụ ihe ọ na-eme m ma ahụrụ m vidiyo na youtube nke nwere azịza ikpeazụ. Ihe okwu a bụ na ha ga-enyerịrị nhọrọ mmepe ma ọ bụrụ na ha enyere ya aka, ha ga-enye n'ime igbe ikpeazụ a na-akpọ ngwa adịghị arụ ọrụ ma ozugbo ha nọrọ ebe ahụ, ha na-achọ ngwa ahụ na-enye ha nsogbu, ha metụrụ ya aka n'ụzọ dị otú a ha na-etinye ya na-adịghị arụ ọrụ. Mgbe ahụ, ha ga-amalitegharị cel na ụfọdụ ụfọdụ maka nke a iji nwee mmetụta. Mgbe ahụ ha ga-agarịrị ngwa na nhazi, chọọ ngwa ahụ ma nye ya ikikere niile. N'ụzọ dị otú a, a na-edozi ihe niile.
Enweela m ngwa ndị ahụ ma otu ihe ahụ na-eme m. Apụghị m ịchọta azịza ya. Achọghị m ka m weghachi ya site na ụlọ ọrụ x x egwuregwu nke m gaferelarị, onye ga-enyere m aka biko.
Enwere m ike iche maka ihe m kwurula: tinye Ntọala / Ngwa / Hazie ma ọ bụ jikwaa ngwa / Ngwa ikike ma nyochaa ihe dị na ngalaba a, ọkachasị Nchekwa. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ọ ka mma inye ikike.
Daalụ Joako, nke ahụ bụ azịza maka akara mkpanaka m 4. M nwere ụbọchị atọ na-alụ ọgụ maka nsogbu ikike a maka ngwa m.
Joako ekele 4. 4 ụbọchị gasịrị m jisiri ike idozi ya na m Cheta 3. Nsogbu bụ sidebar taabụ. Na gbaziri, ngwa ntọala, na ihuenyo na ndabere, otu aka arụmọrụ, iba na deactivate XNUMX nhọrọ… .. Echeghị m na ọ na-emesị ofu.
I meela nke ukwuu Dandi, ewepụrụ m Nna-ukwu Dị Ọcha ma rụọ ọrụ! Ọ fọrọ nke nta ka m gbawaa ekwentị m tupu m gụọ okwu gị
Dandy; NTARA ETIKA !!! dị ọcha nna ukwu si. Sel Ọ Dị Mma.
MILLLLLL THANKSSSSSSSSSSSSSSSS M KWES SOLR SOL KWES ITR IT YA
Naanị ị ga-ewepụ PROTECTORESSS
Kedu ka m ga esi eme ya na xperia z3 m?
Zaghachi Ariel Ajhuacho
N'ihe edetu m 4, enweghị m ngwa nhicha arụnyere dị ka nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana enwere m ike ịchọta azịza ha wee kwụsị ọrụ ahụ na ụlọ, azụ na bọtịnụ menu pụtara na ihuenyo ahụ, gaa na ntọala> ihuenyo na ndabere> otu aka ọrụ> akụkụ igodo akụkụ ma gbanyụọ nhọrọ ahụ
Zaghachi julio villasmil
Julio Villasmil, ị kachasị mma! Amalitere m iwepụ ọtụtụ mmemme na enweghị ihe ọ bụla. Ruo mgbe m mere ihe ikwuru na wowwww emeghara ya ozugbo. Daalụ!
Marita tụgharịrị okwu m. N'ebe ahụ m na-ekwu otu esi ewepụ nsogbu a kpamkpam n'ihi na ịgbanyụ ngwa anaghị ewepụ nsogbu ahụ.
Site na ngwọta gị enwere m ike idozi, mgbe m lechara vidiyo nke vidiyo otu ihe na nke ọzọ, ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị
PT Teknụzụ (@UloAmara) dijo
Zaghachi PT Technology (@turiano_rosario)
Ndewo, achọrọ m ịhapụ obere ájá m, ikekwe enweghị m ike inyere mmadụ niile aka, mana enwere m olileanya na m nwere ike.
Enwere m Samsung Rịba ama 4, ma ọ bụ ihe ọ bụla edere, na site n'otu oge gaa na nke ọzọ enwere m nsogbu nke ihuenyo ekpuchi, nke n'ụzọ, karịrị mkpasu iwe. Na nkenke, dozie ya otu ụbọchị ahụ site na ịkwaga na inyocha gị. Nsogbu m mere oge m wụnye Prisma na Pokemon Go, ngwa iji dezie foto, ọ bụrụ na onye nwere ekwentị dịka m chọrọ ịwụnye ya, emela ya, biko hahaha
Ọfọn, olee otu m ga esi edozi nsogbu ahụ? Ana m emeghe ozi oge niile, ya bụ, m ga - enweta nkata nkata ahụ, ihe m mere ọfụma bụ iwepụ ya, ihe m na - ekwu bụ na agbanyiri m ozi maka obere oge, e mezie nsogbu ahụ. Tinye ngwa niile ebe nsogbu ahụ mere wee nwee ike ịhapụ igwefoto, nchekwa, wdg.
O doro anya na m ruru nsonaazụ a site na deactivating ọtụtụ ngwa, mana enwere m olileanya na ọ bụrụ na ị nwere ekwentị dịka nke m, echiche m na-arụ ọrụ maka gị.
Daalụ maka ịgụ m 🙂
Zaghachi Rocío Terrazas
GUYS AD GGH C CWA site na ime APP A MA Ọ B DE NA-EME APP. LEE NT COMKWU ND Q KWES QR Q M KWES ISR Q, AKA NA-EKWU OWBOWTA AKA SI AKW THESỌ NSỌP DTA Ọ B ,R WH, MGBE HA NA-EME APP MA Ọ B AN Ọ B IT NA Ọ GA-EME MGBE MGBE HA KWESNR THE IHE. NA Ngwọta M AKA M akọwa otu esi etinye akwụkwọ adịghị arụ ọrụ ma nwee ike inye gị ikikere.
Enwere m otu nsogbu ahụ na nnukwu ihuenyo, enwere m ụlọ ọrụ nrụpụta na ekwentị ma ọ na-eme m. Enweghị m ike iji ngwa ọ bụla n'ihi na ọ na-ajụ m ikike maka kọntaktị m ma ọ bụ nchekwa m na mgbe m chọrọ inye ha ya, enwetara m ihuenyo ahụ ọzọ, ọ na-ewe iwe. Agbasola usoro ndị ị kwuru na nhọrọ ndị nrụpụta yana etinyere ngwa ahụ mgbe m malitegharịrị ekwentị mkpanaaka.
Enwere m Xperia Z3, ị nwere ike inyere m aka?
Morningtụtụ ọma Alvaro, enwere oge mgbe m mere ngwa anaghị arụ ọrụ m malitegharia sel na mgbe m gara inye ya ikikere ọ ka anaghị ahapụ m n'ihi na ngwa ahụ ka na-arụ ọrụ ma m laghachiri ịme usoro ahụ ma tinye ya ngwa adịghị arụ ọrụ ọ nweghịzị m nwere mkpa ịmalitegharị ekwentị m ọzọ enwerelarị m gara ozugbo na ntọala, ngwa, chọọ ngwa ahụ ma nye m ohere inye ya ikikere niile. Gbalịa ya otu a, na-anwale oge 2 ma ị gwa m ma ọ bụrụ na ọ dị otu a maka m, ọ daghị m mba
Daalụ !!! Ewepụrụ m igbe atọ 'otu aka' ma ọ rụ ọrụ !!!! Kedu ọdịda na akụkụ nke android, samsung ma ọ bụ onye ọ bụla ......
Ndewo caroline, n'ụzọ ahụ ị ga - edozi nsogbu ahụ nwa oge, ọ ga - eme gị na ngwa ọzọ yana ọzọ. Chọọ okwu m na ebe ahụ m kọwara etu esi ewepụ nsogbu a n'ụzọ doro anya. Daalụ
Daalụ dandy, ọ bụrụ na ọ bụghị gị, aga m aga n'ihu na nsogbu ahụ
Daalụ nke ukwuu, ọ rụkwara m otu ihe ahụ
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị.Emechala m nna m ukwu dị ọcha, ekwentị m laghachikwa nkịtị.
Iwepu du batara na onye isi ya doziri nsogbu… Isi adabala m.
Zaghachi Naty Liz Cantuña
Enwere m ihe edeturu 4 na ihuenyo na ndabere (gbanyụọ nhọrọ 3) ziri ezi, taa bụ ụbọchị dị egwu
M gbanyụọ nhọrọ ahụ, ya mere ọ nwere nkwarụ, ọ na-egosi m na ọ nweghị na mgbe m chọrọ inye ikike m ga-alaghachi na nhazi ahụ ma mgbe m nyochachara ọ na-agwa m na anaghị agbanye ya n'oge ahụ n'ihi na ọ naghị enye m ikike ọ dị ka okirikiri….
Zaghachi Joshua marin castro
N'ihe m, m ga-ewepụtụ ikikere na Button Onye nzọpụta na mgbe etinyere ngwà ndị ahụ, nye ha ọzọ na ihe niile arụgoro ọzọ n'enweghị nsogbu. Ọ bara ezigbo uru ịhụ ihe ndị a kwuru. Ana m ekele gị niile.
Enwere m ihuenyo ahụ na enweghị ike ịmeghe ya ma otu nwanyị kwuru na m gbanyụọ Du Master na m mere ya ma dozie ekwentị ahụ. Luckily n'ihi na ọ bụ isi ọwụwa
Zaghachi ka marta antunez
Ọfọn, enweghị m nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ mmemme ọ bụla yiri ya na enweghị m ike iwepu ya. Nchịkọta nkuzi ndị ahụ anaghị arụ ọrụ maka m. Kedu ihe android na na na. M na-achọsi ike na-imefusị oge m
Emezila m nsogbu ahụ, ọ bụ ngwa ngwa ngwa Du nke dị n'ụzọ. daalụ maka nkata dị mkpa a
Zaghachi guillermo carrillo
Ndi folks, mgbe ha gwasiri onye obula n’ime ihe ndi ituru aro gi, nani ihe jisiri ike kpughee ihe ama ama na ikike ikike enyeghi bu… weghachite Samsung S7 m na ntọala mbu. Weghachi ngwa ọ bụla dị mkpa mgbe e mesịrị na ikikere kwekọrọ. wee nwetachaa data niile maka Akaụntụ Samsung na Google m, ,, izu atọ agafeela kemgbe m nwetara aka m mana oge a jisiri ike mee ya ka ọ rụọ ọrụ mgbe niile !!!!
Ebe ọ bụ na ndetu 4 melite ụbọchị ole na ole gara aga, taa mgbe m wụnye ngwa egwuregwu (ọ tinyebeghị ihe ọ bụla ruo ogologo oge) na enwetara m windo nwere "enyo ihuenyo achọpụtara, gaa na ntọala / ngwa ma rụọ ọrụ "ma ọ dịghị ekwe ka ime ihe ọ na-ekwu.
Ọ dị m nnọọ ka gallery ahụ.
N'aka nke ọzọ, wathsapp anaghị emekọrịta m ebe ọ bụ na njehie a amalitela.
Ndewo, enwere m otu gbakwunyere Otu na ihe yiri ya na-eme m, mana ọ naghị etinye nhọrọ ọ bụla nke ngwa ọ bụla.
Ọ na-eziga m na Ntọala_ Dee banyere ngwa ndị ọzọ ma hapụ m ka m gbanwee YES / NO.
M bidogharia mkpanaka ahụ ma nsogbu ahụ wee laa maka nkeji ole na ole mana enweghị m ike ịnweta ihe ọ bụla: foto, ọnọdụ, akwụkwọ ...
Enweghi m ngwa ọ bụla. Ọ na-agụsịrị m nhicha ma ọ bụ iwebata ekwentị.
Achọrọ m enyemaka, daalụ
N’ezie ọ bụ Nnaenyi Clan kpatara ya
Ọ bụ Juan Calderon dijo
ọ bụrụ na nna ukwu ahụ dị ọcha bụ nsogbu ... wepu ya ma enwere m ike iji ndị na-arịọ maka ikike ahụ a gọziri agọzi ...
Zaghachi Juan Calderon
KPỌRỌ ỌR MAS ỌMLEM S KWES CR THE KWES BR TH NA E NWERE Nsogbu NILE, MA Ọ KWASERSRERS N’IWU NA Ọ B ITGH IT KA M EME IHE Ọ bụla, Ikike IHE Ọ B FORLA, Apụghị m iji ekwentị m mee ihe ọ bụla ……… .. Nyere aka !!!
Zaghachi Cynelle Yvonne Lebron Rosado
Alci kari dijo
Mgbe ọtụtụ ụbọchị nke m rapaara na-agbalị idozi nsogbu nke ihuenyo overlap na niile ngwa, na-enye kọmputa na-abaghị uru site na 80% ... nke ọma, ihe m mere bụ ịbanye NT -KWU-AKW ANDKWỌ NA AKWACKKWỌ AKW -KWỌ AKW AndKWỌ wee kwụsị ọrụ ahụ Enwere nhọrọ 3 ebe ahụ ... wee malitegharịa kọmpụta ahụ ma site na qlli tinye whatsaap ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-ejighi eji ya na ihuenyo ịdọ aka ná ntị wee pụta ọzọ wee nye m ntọala site na otu ngwa ahụ yyyyy ebe ahụ enwere m ike ịgbalite ikike maka nke ọ bụla ...
Ọ rụụrụ m ... ọ ga-adịrị mmadụ niile mma
Zaghachi Alci karina
Ndewo, ehihie ọma, m nwere Samsung Galaxy S5 na enwere m otu nsogbu ịbanye nsị, Osisi na ngwa ndị ọzọ mana ewepụla m nna ukwu ahụ dị ọcha ma nsogbu ahụ na-aga n'ihu na ọ nwere ike ịbụ m na-achọsi ike. Kedu ka m ga - esi dozie ya tupu oge eruo.
Mmadu enyere m aka? Enweghị m ike ịnakwere ikike WhatsApp… Enweghị m ngwa ọ bụla iji bulie ihe ọ bụla, enwere m ihe niile na ndabara site na ekwentị, enwere m s6 galaxy.
Ezigbo, Enwere m ihe ngosi 4, m na-ara ara, n'ọnọdụ m ma na-ekele gị, edozila ya site na ịgbanyụ akụkụ aka ekpe nke egosiri na ihuenyo!
Ntọala ihuenyo na nzụlite - ọrụ aka otu - ogwe igodo akụkụ (gbanyụọ nhọrọ a site na bọtịnụ dị n'elu)
Ya gaziere onye obula! Na ndidi!
Nsogbu ugbu a bụ na kọntaktị, enweghị m ike ịgbakwunye nọmba?
Ọ dị mma, enwere m otu nsogbu ahụ ma ọ rụọ ọrụ ugbu a, daalụ Yepiz
Zaghachi David Hernandez
Zaghachi Alexander Lopez Lira
anya. akụkụ igodo ahụ na-arụkwa ọrụ ma ọ bụrụ na azịza ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ ... Emere m ya ma nweta ebe a na-ese foto ọzọ
Morningtụtụ ọma onye ọ bụla, ekele Erii_Pausini Enwere m ike iwepụ ngwa ọjọọ, dị ka ndị a:
Kwụpụ 1: Ikwesiri ibudata ngwa ndị a, m na - ebudata ha na Uptodown n'agbanyeghị na ọ budatara ya na playstore.
2. CM Nchedo
4. Isi ike Trojan egbu egbu
Budata ngwugwu a, gaa na ntọala wee lelee nhọrọ: «Unknown Sources».
Ha na-aga n'ihu ịwụnye n'usoro ahụ n'otu n'ime usoro (3) ha na-achọ nje ahụ ma kpoo ma ọ bụ gbanyụọ ha site na ịpị ya ruo mgbe nhọrọ dị na ya na mgbe ị na-etinye usoro ikpeazụ (4) ọ bụ nke a ga-ewepụ kpamkpam nje na ngwa ojoo ojoo.
Ha na-enyocha ngwaọrụ ahụ ma mgbe ha hụrụ nje ahụ ha kwuru ka ha nye nhọrọ igbu.
Ha meghee antivirus ozo iji mechaa kpochapu ahihia.
Ha bidogharịa ya gawa
Obi ekele nye Erii_Pausini
Zaghachi Mauricio Palazzolo
Daalụ! wepụ nna ukwu ahụ dị ọcha ọ wee rụọ ọrụ!
Agwara m ya site na iwepu Twilight
Ngwọta ọzọ enwere ike, ọ bụrụ na ha nwere nzacha ọkụ (ọ na-eme ka ìhè dị na ekwentị belata nchapụta ya karịa), ha ga-agbanyụ ya, wee megharịa ma ọ bụ kwụsị ikike ha ga-eji.
Ndewo, enwere ike inyere m aka! Enwere m BQ E5s na Nchịkwa Ngwa Ngwa anaghị emetụta. Amaghị m ihe m ga - eme ọzọ, enweghị m ike ịhụ foto, ma ọ bụ bugoo na facebook ma ọ bụ zipu site na whatssap ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ekele na ekele
M wepụrụ CM LOKER na CM Security ma dozie nsogbu.
Ndewo, m na-anwale usoro ndị a ma ọ naghị arụ ọrụ maka m, bọtịnụ nke ngwa m chọrọ ịgbanwe apụtaghị ma ọ bụ na ọ bịara dị ka egbochiri, ihe ngwọta nke mere ka m dozie nsogbu nke ihuenyo ekpuchi bụ: Dozie faịlụ niile m nwere na ekwentị, onyonyo, vidiyo, egwu, akwụkwọ, ederede olu, ihe niile, etinye m na ngwaọrụ ọzọ ka m ghara idafu ozi ọ bụla ma ọ bụ kaadị SD ma wee wepu kaadị ahụ ekwentị ozugbo na e mere na ekwentị na-enweghị ụdị faịlụ m gara ikikere nhọrọ na m nwee ike gbanwee nnọọ niile ikikere ka m mmasị na-enweghị iwepụ ihe ọ bụla ngwa, ozugbo ikike gbanwere, m banyere ozi ọzọ na ekwentị na enyeghị m nsogbu na overlap.
Enwere m olileanya na nhọrọ a ga-ejere gị ozi!
Zaghachi Selene Vélez
Ọ rụụrụ m ọrụ ịkụda nna ukwu dị ọcha !!!!
Joshua nke-atọ dijo
ndị m jisiri ike idozi ya !!!!
Enwere m nsogbu ahụ nke jụrụ m maka ikikere n'ihi ịmachi blah blah blah… ọ tụgharịrị na enwere m ngwa arụnyere nke na-adị mgbe niile nelu ihuenyo… otu n'ime ọtụtụ Windows… M wepụrụ ya na sooo !!! edozi nsogbu
Zaghachi Joshua Tercero
Naanị ị ga-akụ ngwa na-akpata nsogbu ahụ. Amalitere m ịkwụsị ụfọdụ ọrụ na ederede na ngwa ndị ọzọ na edozi nsogbu. N'ihe m, enweburu m nkwarụ cortana na Mobilgo (nke m na-amaghị ihe ha bụ ma enweghị m mmasị na ya). Na mbụ aghụghọ nke itinye batrị na ọnọdụ nchekwa iji nye ikikere na-arụrụ m ọrụ, mana naanị Ngwa Power Point na Telegram rụụrụ m ọrụ. Ndidi ma gbanyụọ ngwa nwere ikike ide ihe na ndị ọzọ. Jisie!
Zaghachi Silvia Gracia García
Enweghi nkwado EasyTouch. Ọ na - eweta otu nsogbu ahụ dị ka Master dị ọcha
Ndewo, enwere m nkwarụ niile (ọbụlagodi sistemụ ahụ) dịka ekwentị rịọrọ m oge ọ bụla m gbalịrị ịnye ikikere na ngwa m, agbanyeghị na enwebeghị m ike inye ikikere ma ha anaghị arụ ọrụ, mmadụ nwere ike inyere m aka ? Enwere m Samsung Note 4 na gam akporo 6.0.1
Eziokwu bu na m kpochapuru ihe nhicha ma obu antivirus niile i nwere na ekwentị laghachiri na nkiti, emere m ya ma ya aru oru ...
Zaghachi William Encalada
N'ezie onye tinyere onye nwe ya dị ọcha, bụ onye amamihe zuru oke, tinye ya dịka onye ndụmọdụ, were ya n'ọrụ, n'ihi na ndị ọzọ enweghị ike ịchọta azịza ya, ekele
Zaghachi Jorge Ungar
Ụtụtụ onye ọ bụla.
Abụ m onye ọrụ Galaxy S7, enwere m nsogbu a, agbalịrị m ọtụtụ ngwọta akwadoro na ịntanetị, n'ikpeazụ ihe nyeere m aka bụ ịmalite kọmputa na ọnọdụ nchekwa; ịnọ n'ọnọdụ dị mma, agara m nhazi na njikwa ngwa, mgbe ahụ na ngwa ọ bụla na nhọrọ ikikere, enwere m ike idezi ha n'enweghị nsogbu ọ bụla; Mgbe ịmalitegharị kọmputa ahụ na ọnọdụ nkịtị, ikikere dị ka ahapụbere na ọnọdụ nchekwa, yana ngwọta achọrọ maka nsogbu ahụ.
Zaghachi Álvaro Fierro Núñez
Ndewo ndị enyi…. ma ọ bụrụ na ọ na-enyere ha aka na ihe…. iwepu ngwa nche ... dị ka nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ ndị ọzọ ... ọ nyeere m aka ... ekele
Mmụọ ozi Gabriel dijo
Ndewo, nke mbụ, ana m ekele gị maka onyinye gị bara uru.
Eziokwu bụ na ihe nyeere m aka nke ukwuu bụ ịhụ na site n’itinye usoro ihe a ma ọ bụ mmemme ahụ, ọ rụpụtara nke ọma ọzọ.
N'okwu m, mmemme ahụ bụ nke m budatara iji dezie ọdịyo. Dịka ị pụrụ ịhụ, o nweghị ihe jikọrọ ya na nchekwa ma amaghị m ihe kpatara ọkụ mmụọ mmemme a nwere ike ị chọrọ ihu, mana mgbe m wepụrụ ya, ihe niile laghachị nkịtị.
N'agbanyeghị nke ahụ, daalụ maka onyinye gị.
Zaghachi Angel Gabriel
Kedu ihe ị na-echedo ekwentị ya? Daalụ
N'ogbe, okwu gị bara ezigbo uru ịmalite ịghọta ihe njehie ahụ bụ na azịza ya bụ iji kpochapụ ihe ọ bụla na-eme ka nchekwa dị ọcha na nke m, ọ bụ Hello Launcher, maka ndị ọzọ nna ukwu dị ọcha ma ọ bụ ngwa nke ụdị ahụ nyochaa nke ọma. ha nwere nke na-akpata nsogbu ahụ
Ọ naghị arụ ọrụ dị ka nke ahụ na zte agụba m v7 ma ị ga - ahụ ya, m gbalịrị n'ọtụtụ ụzọ ma naanị nke ngebichi na - apụta, ị nwere ike inyere m aka?
N'ihi amamihe nke Master dị ọcha!
Ndewo, enwere m moto g 3, android 6.0.1 na Ngwa Manager ngwa apụtaghị ozugbo m banyere ntọala. Agbalịrị m ihe niile ma amaghị m ihe m ga-eme.
Ndewo, ehihie ọma, enwere m otu nsogbu ahụ na nbudata ihuenyo mana jiri igwe cam L03, ọ naghị ekwe ka m nweta kọntaktị whatsaap m ma ọ bụ ihe ọ bụla! Enyemaka !!
Naanị kpochapụ ngwa niile ị ga-achọ ka ọ dị ọcha ma ọ bụ kpochapụ nje virus nke bụ ihe na-eme ka ekwentị gị mee nke na-arụ ọrụ m.
Zaghachi MARCO PEREZ
Nanị ihe ga-eme bụ iwepụ ngwa duboster niile, ma ọ bụ ngwa nchekwa batrị site na ndị nrụpụta ọ bụla, ọbụlagodi antivirus
Zaghachi JULIO CESAR AVILA ASAN
Enwere m nnukwu nsogbu ... Achọrọ m ịgbalite ebe eserese ngosi na WhatsApp ma emechara m nwee ọgbaghara site na ịpị nrụpụta nrụpụta ... Ugbu a ọ dị m mkpa iwepu mkpuchi ihuenyo iji nwee ike ịlaghachi na gallery m, nwee m kọntaktị na WhatsApp wee banye Skype na ngwa ndị ọzọ mana amaghị m ebe ọ dị ma ọ bụ otu esi eme ya. Afraidjọ na-atụ m ịmehiere ọzọ. N'okwu m ọ bụ Moto x ọgbọ nke abụọ na gam akporo 6.0
Zaghachi Rocio Saal
HELLO ROCIO SAAL naanị UNINTEL APPS I Nwere na ekwentị gị, nke a na-ejikarị eme ka ị dị ọcha na njedebe nke ga-enyere gị aka ma rụọ ọrụ ikike niile AMI rụrụ ọrụ maka m.
Ọ B IFR IT na Ọ NA-Arụ ọrụ niile, ị ga-ehichapụ ekwentị gị, ọ na-agụ ya dị ka VIRUS na ọ na-akwụsị gị ọtụtụ APPS, ọ ga-arụ ọrụ ugbu a ma ọ bụrụ na m nwere ike iji ekwentị m.
Daalụ ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na-ewepu akwụkwọ ndị ị na-eche n'echiche iwepu nje.
M nnọọ edozi ya site na iwepu Twilight
Zaghachi Alfonso Javier Díez López
Ami ọ bụụrụ m ọrụ iwepu pokemon go
Gini mere na enweghị m ngwa ọ bụla?
Naanị ihichapụ pokemon gaa na ihe niile rụrụ nnukwu ọrụ
Zaghachi Jesus Adrian
Zaghachi ka lola andré
Francisco, ezigbo abalị, echere m na ọ ga-anọrịrị abalị na Barcelona wee kelee gị maka nlebara anya na aro ị na-enye maka nsogbu m na-aga ịkọwapụta:
S6 Edge, enwere oge mgbe aka anaghị aza ... M chere obere, ọ nwere ike ịbụ nkeji 5 ma metụ aka; ma n'oge ndị ọzọ, ọ bụghị ntakịrị, ọ bụ ntakịrị na ihu mmetụ ahụ na-aza ọzọ… Gini ga - abụ ihe kpatara ya ma enwere azịza ya?
Ekwesiri ighota na ibughari, site n'uzo obula, adighi edozi nsogbu a, dika o nwere ike ibido ma ghara imeghachi aka.
M na-edetara gị akwụkwọ site na Caracas, Venezuela na enwere m obi ekele na-enweghị atụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka
Zaghachi Vicente Reverón
naanị ihe m na-ekwu bụ I meela ka ihichapụ ngwa ndị a ma edozi nsogbu ahụ
Ha ekwesịghị iwepu APP ọ bụla na-eche na ọ bụrụ na ha mee nke ahụ, mgbe ahụ mgbe ha wụnye ọzọ nsogbu ahụ ga-alaghachi. ezi ihe ngwọta bụ iji mee ka ndị nrụpụta nhọrọ (nke a na-eme site na ịpị nọmba ụlọ ahụ ọtụtụ ugboro) na na nhọrọ ndị ahụ, e nwere otu na-ekwu iji rụọ ọrụ mkpuchi ihuenyo, ọ dịghị ihe ọzọ. Ha ga - enwe ike idozi nsogbu gị n’emeghị ngwa ọ bụla.
Zaghachi Marco Mancilla
hello enwere m j7 ma esoro m usoro nke otu esi gbanyụọ ihe mkpuchi ma enwere m ozi na-ekwu na m nwere mkpuchi ihuenyo, gịnị ka m ga-eme n'okwu a?
Daalụ !!! M kpughere Master dị ọcha ma dozie nsogbu ahụ.
Ekele dịrị m nke ukwuu n'oge gara aga m nwere ike !!! IHE NDND A:
Ndewo ndewo, amaara m na okwu ahụ emeela ochie mana maka ndị ọhụụ na-ahụ nke a bụ ihe ngwọta nye ikpe ha ebe ọ bụ na ọ mere m na Samsung s6 ma ọ bụ s5 ha na-aga ntọala-njikwa ngwa mgbe ha na-apụ ha ga-ahụ isi atọ n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ okwu ọzọ pịa ebe ahụ wee họrọ ngwa nwere ike ma nwee ike ịkwụsị otu otu site na iwepu acha anụnụ anụnụ na akara ngosi ntụ na voila na App ọ bụla nwere ike hazie ha ka ha si chọọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nnabata dị ọcha iwepu ya, ọ rụpụtara m ọrụ.
Zaghachi na Dayana1987
Biko biko nyere m aka, m na-achọ ibudata whatssap mana mgbe m rịọrọ maka ikikere ọ na-ezitere m ka m kwụsị ọrụ ahụ ma mgbe m gara imebi ha ngwa ngwa ahụ apụtaghị ... gịnị ka m ga - eme? Ọ na - enyere m aka enwebeghị ike ịwụnye ya n'ụzọ ziri ezi ...… .. ???????
Zaghachi STEPHANIE MADRID
Enwere m nsogbu ahụ na igwe okwu whatsap anaghị arụ ọrụ maka m, ọ na-agwa m na onye na-enyere m aka, na-ekwu maka ntinye okwu na ihuenyo, emeela m usoro niile ma ọ nweghị ihe na - eso nsogbu ahụ.
Zaghachi Eliecer Becerra
N'ikwu eziokwu, vidiyo gị na-agwa gị ihe ọ bụ, ọ naghị enyere aka idozi nsogbu ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri.
Azịza nye @
Ndewo ị nwere ike inyere m aka biko, enwere m j7 2016 ma na mberede, ana m ebudata akwụkwọ ahụaja site na mkpuchi cm na ihuenyo na akara ngosi ya gbanwere kpamkpam na ụzọ mkpirisi niile o nwere n'ime ya ehichapụla ma ndị nọ ebe ahụ mere ibu, Amaghị m ihe ọ na-eme, M ugbua uninstalled ụfọdụ akwụkwọ ahụaja ngwa na m nwere na ihe ọ bụla, Amaghị m otú idozi ya. Mgbe nke ahụ pụtara, ọ gwara m ka m jiri touchz ma ọ bụ ihe mbụ emetụ ihe nchọgharị ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, naanị m kụrụ otu n'ime 2 n'ihi na enweghị m ike ịbanye na ihuenyo ahụ wee pụta.
Ndewo Elena, ị ga-abanye ntọala ngwa pịa n'elu aka nri ebe akara atọ ma ọ bụ okwu More pịa na ngwa ndabara ma họrọ Malite Toucwiz.
Ọ naghị arụ ọrụ m enweghị ike iwepu elu igwe
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m kwụsị ọrụ mkpuchi nke ngwa niile gụnyere ngwa ngwa yana ọ naghị ekwe ka m nye ikikere, gịnị ka m ga - eme?
Zaghachi Manuel Maneiro
Ndewo Francisco, daalụ maka vidiyo gị, ọ bara ezigbo uru, agbanyeghị na m nwere motorola G2 yana agbanyeghị iwepu ikike iji degharịa ngwa niile dị na ndepụta ahụ mgbe m na-abanye na menu ahụ (Achọpụtaghị m sistemu ahụ zoro ezo na mbụ) Enweghi m ike inye ikike iji nweta whatsapp iji nweta kọntaktị, igwe okwu, igwefoto ma ọ bụ ihe ọ bụla ... Ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla otu esi enyere m aka, enwere m ekele maka ya!
Zaghachi Ana María Alvarez
Enwere m nkwarụ niile na nsogbu ahụ. Ọ kwụsịtụrụ ikike niile na whatsapp maka m. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Emere m ihe niile site na nzọụkwụ mana achọrọ m inye ikike na WhatsApp ma amaghị m ihe m ga-eme ma ha nyere m aka
Zaghachi jose ramirez
Enwere m S7 na mgbe ọ hapụsịrị ya na ngalaba nrụpụta ọrụ ya ma nyefe ya ozi ndabere, otu ihe ahụ mere m. Naanị m na-abanye Ntọala, mgbe ahụ Ngwa, mgbe ahụ Njikwa Ngwa na n'elu aka ekpe nhọrọ ahụ ọzọ wee họrọ Ngwa nke nwere ike ịpụta ..., ma gbanyụọ 360 nchekwa na nchekwa 360. na njikere. Ọ nwere ike ịbụ naanị gbanyụọ ọ bụla antivirus na Go. Edozi
Enwere m nnukwu nsogbu enweghị m ike inye ikikere ka wahtsapp na eweghasị ikike niile m nwere na ngwa ndị ọzọ ebudatara m gbalịrị ihe niile m na-eme ebe a xq nc ebe ọzọ m gbalịrị m gbalịrị ịkwụsị ngwa ahụ site na sistemụ sistemụ na ihe ọ bụla na-egosi na obere onye na-ere ahịa mj, m na-eche na ọ ga-adị m mma ịtụba ekwentị m na ahịhịa
Ọtụtụ ndị enyi ekele !!! Ha nyeere m aka nke ukwuu !!! Enweghị m ike iwepụ ya ihe ọ bụla, ruo mgbe m malitere ịhapụ ihe niile! Have ga-ewepu otu otu wee nwalee nke na - akpata esemokwu, nke ahụ bụ etu o siri rụọ ọrụ! Ana m ekele gị maka ntinye gị !!!
Onyinyechi ugochukwu (@igwe_nkechi) dijo
Ndewo, achọrọ m ikele gị maka ọdịnaya gị, ha na-enyere anyị aka ịghara ịkwụ ụgwọ dị elu iji dozie nsogbu nke akụrụngwa anyị ma ọ bụ ihe mara mma. Ugbu a, enwere m otu nsogbu a na instagram, ọkachasị na boomerang, agbalịrị m ime ihe ha na-egosi mana ọ naghị egosi m ngwa niile na kọmputa, instagram, boomerang na whatsapp na-efu, amaghị m etu idozi ya. Ekwentị m dị ọhụrụ, otu izu, ọ bụ ZTE agụba A310, ọ ga-adị mkpa iji akwụkwọ ikike ahụ?
Zaghachi Laura CabellosdeAura (@_roja)
MGBE SEBỌCH SE OFBỌCH OF OFBỌCH TR NILE, KPỌTA DU SPEED BOOSTER site na nkwanye nke onye si na akwụkwọ a na nsonaazụ a ozugbo. THANKS ROLANDO, ANY ARE B ARER UN TOCAYO.
Zaghachi na ROLANDO
Ndewo ndị mmepe, onye ọ bụla maara ka esi ege ntị na fim na Latin ọdịyo ???, ihe nkiri niile m hụrụ bụ ndị nwere ọdịyo na «Spanish» si Europe; Ọ bụrụ na enwere ụzọ ọ bụla iji gee ha ntị na Latin Spanish ana m ekele gị… ekele mgbe ahụ
Chei, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ihuenyo a, enweghị m ike ịchọta ngwa nke gbochiri m itinye ikikere na n'ikpeazụ ọ ghọrọ "ES File Explorer" ebe m nwere "ES Swipe" arụ ọrụ; M deactiactive ya na voila! ?
Ekwesịrị m iwepụ ES Explorer, ewe dozie nsogbu ahụ
maka ndi ogugu
Azịza ya dị nnọọ mfe:
ị ghaghị ịmata ngwa ndị ibudatara na ụlọ ahịa egwu gị
ma wepu ndi ohuru ma nwalee ikikere ichikota. ole
Enwere m Huawei P8 lite 1st ọgbọ na ọ bụ ụbọchị ole na ole ugbu a na dabere na ihe m na-eji, overlap na-apụta. Mana nke kachasị taa, ebe ọ bụ na m jiri wallapop bulite ngwaahịa, ọ gaghị ekwe ka m tinye foto n'ihi njikọta na ihe m metụrụ aka, mgbe ahụ, ọ etinyela aka na m na WhatsApp ma ugbu a ndị kọntaktị na-apụta n'ọnụ ọgụgụ na-enweghị aha o kweghi ka m tinye foto ma obu reyi audios… Nyere !!!
Enwere m otu nsogbu ahụ ma emesịa m chọpụta na ngwa ọzọ nke na-enye nsogbu ihuenyo ahụ bụ ngwa ES FILE EXPLORER, nsogbu ahụ kpatara ES FILE na-eweta ngwa ES WIPE nke etinyere aka na akpaghị aka mgbe ị na-etinye ES FILE Mgbe ahụ ị nwere imeghe Es FILE, pịa na elu aka ekpe button, deactivate ES WIPE na nsogbu dị n'ofe. Aghaghị m ikwu na nsogbu ahụ ewelarị m iwe
Zaghachi Guillermo Bermudez
Daalụ nke ukwuu, achọrọ m ịtụ ekwentị m na mgbidi. Naanị iwepụ Njikwa faili na ihe niile na-agba ọsọ.
Enwere m bq ma m aghọtabeghị otu esi ewepu m ya, ana m enweta ihu karịa ndị na - egosi na vidiyo gị ma enweghị m ike iwepu ihuenyo mpụta 🙁
M gosi na n'elu kpughere site na ndị ọzọ bụ cleanmaster bụ ihe nzuzu ma m ma ọ bụrụ na m nwere ike idozi ya t. Ekele maka data…
You nwere ike inyere m aka mgbe m chọrọ ịgbanwe foto profaịlụ m na Facebook, ana m enweta nke a site na nbudata ihuenyo ma hụ na ọ na-arụ ọrụ maka fecebook, amaghị m ma ọ bụ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ya.
Daalụ maka ewepu ozi Es faịlụ na Explorer. Daalụ maka nzaghachi
Gam akporo J5 dijo
Daalụ, m ga-ehichapụ
dị ọcha nna ukwu
ihe niile na-arụ ọrụ ebube
Zaghachi gam akporo J5
Pana Guillermo Bermúdez dị na ngwa ES FILE EXPLORER, nsogbu a kpatara ES FILE na-eweta ngwa ES WIPE nke arụ ọrụ ma deactivates akụkụ nke ngwa ahụ.
Ndewo, ikpe m yiri, enwere m LG K10 ma amaghị m otu esi ewepu mkpuchi ihuenyo, enwere ngwa ole na ole anaghị emeghe m maka nke ahụ
Zaghachi Adrian Quintero
Ngwọta ya dị nfe, Ọ B AN APP KA ANY THAT WTHERBARA B THAT BTHER ỌBTHERR IN, N’IME M, Ọ B BRAR AKW ENKWỌ D TO MMA, KA ANY SOL KWES ITR WE N’ WELỌ ANY WE NA-AMAGH EN, ekwentị, WHATSAPP ETC, NA ANY WILL GA-EBUPU NA EBUPU APP ANY IF. ANY UN NA-EWUPU APP ANY WE KWES CANR CAN WHATB WHATTA NT WHATP D NA-AAGH US AH US ANY US, Ọ B IT Ọ B THE APP KA ANYIN KWESINR B KWESEFR BE TOBANYERE APP NA-egbochi US.
Eruola m menu iji mee ya, mana ọ na-egosi na isi awọ ...
Daalụ nke ukwuu, ntuziaka gị nyere ezigbo aka
Juliana 77 dijo
M uninstalled ọtụtụ ngwa ọdịnala na ọ na-adịghị edozi nsogbu. Ngwọta dị m n'ọnọdụ bụ ịkwụsị ES swipe nke ngwa nyocha faịlụ Es ma mezie ya ọzọ ekele
Ndewo, emeela m ihe niile, ọ nweghịkwa ihe baara m uru. Kedu ihe ọzọ m nwere ike ịnwale? Daalụ nke ukwuu!
Ndewo ekele! N'okwu m ọ bụrụ na ọ bụ nna ukwu dị ọcha na mgbe ebudatara ọ nwere akụrụngwa ebe ọ na - ejigide bọtịnụ na ihuenyo nke na - arụ ọrụ na akpaghị aka ma ọ na - esiri m ike ịchọta ebe m ga-akwụsị ya mana enwere m ihe ịga nke ọma!
Ndewo, ikpe m yiri, enwere m Samsung j7 Prime na amaghị m otu esi ewepu mkpuchi ihuenyo, enwere ngwa ole na ole anaghị emeghe m maka nke ahụ
Ndewo, o nyeere m aka nke ukwuu, daalụ nke ukwuu. ????. Nsogbu m nwere bụ na ngwa a na-akpọ Simple Control nke m rụnyere n'ihi na enwere oge ụfọdụ enweghị m ike iji mmalite ma ọ bụ bọtịnụ azụ mana aga m ehichapụ ya, daalụ nke ukwuu ??
Ndewo, o nyeere m aka nke ukwuu, daalụ nke ukwuu. ????. Nsogbu m bụ na ngwa akpọrọ Mfe Mfe nke m wụnye n'ihi na enwere oge ụfọdụ enweghị m ike iji bọtịnụ mmalite ma ọ bụ azụ mana m ga-ehichapụ ya, daalụ nke ukwuu ?? ...
Ndewo, enwere m Samsung J5 na agbanyeghị na ahụla vidiyo gị, enweghị m ike iwepu mkpuchi ihuenyo. Ị nwere ike ị nyere m aka? Daalụ
Daalụ ... ọ bụrụ na ọ rụ ọrụ ... ọ were m ogologo oge na ọtụtụ oge iji malitegharịa sel ahụ.
Ekwentị m bụ LG G3. Nsogbu m nwere na ngwa ES File Explorer. Ọbụna ịkwụsị ya anaghị arụ ọrụ, ekwesịrị m iwepụ ya. Ahapụrụ m ikwu maka onye ọ bụla nwere ike inyere gị aka.
Ndewo, enwere m j2 ma enweghị m ike iwepụ ya, biko nyere m aka
Mgbe m gbusịrị ọtụtụ ụzọ, ihe abụọ rụrụ ọrụ maka m, 1. tinye ọnọdụ mberede wee ghara inye oge dị ukwuu iji tinye ngwa nke chọrọ ikikere, nke a rụụrụ m ọrụ n'ihi na n'ezie mmemme ahụ nke gbochiri m abanyebeghị kpamkpam, mana ọ na-arụ ọrụ maka otu ngwa n'otu oge, ma ọ dịkarịa ala ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu ngwa nwere nsogbu.
2. nke kachasị mma bụ usoro ịwụnye ngwa ntinye ngwa https://www.youtube.com/watch?v=Yd4tTxdvhpo M na-ahapụ video nke ebe m hụrụ ihe ngwọta, nke a ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na-ama zuru okè, rụọ ọrụ bọtịnụ na ngwa.
M nwere s5 na m uninstalled niile ngwa na obi ụtọ obere ozi nke overlays na-awụgharị m. Amaghi m ma inwere ike inye m aka.
Emezuru mgbe m siri ọnwụ na ahụrụ m na ewepụla m onye nyocha faịlụ ọ kwụsịrị inye m nsogbu ahụ.
daalụ, na fuck ọcha nna ukwu ngwa bụ nsogbu
Enyemaka!!! Ejisiri m ike "dee banyere ngwa ndị ọzọ" na ntọala, mana mgbe m kụrụ ntụpọ atọ n'akụkụ aka nri, ana m enweta naanị nhọrọ abụọ: gosi ngwa ngwa ma tọgharịa mmasị; ihe ọ bụla iji gbanyụọ ekpuchi ihuenyo
M nwekwara nsogbu a ruo ọtụtụ izu. Agara m onye njikwa ngwa ahụ ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ikike ahụ mana ọ kweghị ka m rụọ ọrụ ụfọdụ. Ihe m mere bụ iwepụ antivirus 360 nke nwekwara ohere ohere. ma oburu na nkowa banyere vidiyo ahu igaghi anwa iwepu ihe ndi ozo cleam master ma obu onye ozo ohere ma obu onye ozo dika m.
Ndewo, enwere m onye nyocha faịlụ ES mgbe iwepu ya doziri nsogbu ahụ.
Wepu nna ukwu ahụ dị ọcha; onye nwere ahihia nma di ngozi.
ndewo, mmadụ enwere ike inyere m aka? Agbalịrị m ịnweta akaụntụ google na j7 prime nke m na-azụta na ụdị nke android 8.1 na ọnụọgụ 6, mana mgbe m megharịrị ma gbanyụọ okwu na m gbadaa ala maka enyemaka na nkọwa na naanị nhọrọ mmemme ga-apụta. Kedu ihe m kwesịrị ịme?? Daalụ
Zaghachi Sandro Esteban
Otu esi eme ihe nkiri si na gam akporo